BitcoinDark စျေး - အွန်လိုင်း BTCD ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BitcoinDark (BTCD)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BitcoinDark (BTCD) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BitcoinDark ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $20 923 467.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BitcoinDark တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BitcoinDark များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BitcoinDarkBTCD သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0000003BitcoinDarkBTCD သို့ ယူရိုEUR€0.0000003BitcoinDarkBTCD သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0000002BitcoinDarkBTCD သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0000003BitcoinDarkBTCD သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.000003BitcoinDarkBTCD သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.000002BitcoinDarkBTCD သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.000006BitcoinDarkBTCD သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.000001BitcoinDarkBTCD သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0000004BitcoinDarkBTCD သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0000004BitcoinDarkBTCD သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.000006BitcoinDarkBTCD သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.000002BitcoinDarkBTCD သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.000002BitcoinDarkBTCD သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.00002BitcoinDarkBTCD သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.00005BitcoinDarkBTCD သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0000004BitcoinDarkBTCD သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0000004BitcoinDarkBTCD သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.000009BitcoinDarkBTCD သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.000002BitcoinDarkBTCD သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.00003BitcoinDarkBTCD သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.000338BitcoinDarkBTCD သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.000115BitcoinDarkBTCD သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.00002BitcoinDarkBTCD သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.000008
BitcoinDarkBTCD သို့ BitcoinBTC0.000000000005 BitcoinDarkBTCD သို့ EthereumETH0.0000000002 BitcoinDarkBTCD သို့ LitecoinLTC0.000000001 BitcoinDarkBTCD သို့ DigitalCashDASH0.000000001 BitcoinDarkBTCD သို့ MoneroXMR0.000000001 BitcoinDarkBTCD သို့ NxtNXT0.000005 BitcoinDarkBTCD သို့ Ethereum ClassicETC0.00000002 BitcoinDarkBTCD သို့ DogecoinDOGE0.000005 BitcoinDarkBTCD သို့ ZCashZEC0.000000002 BitcoinDarkBTCD သို့ BitsharesBTS0.000003 BitcoinDarkBTCD သို့ DigiByteDGB0.000004 BitcoinDarkBTCD သို့ RippleXRP0.0000003
BitcoinDarkBTCD သို့ PeerCoinPPC0.0000003 BitcoinDarkBTCD သို့ CraigsCoinCRAIG13221.21 BitcoinDarkBTCD သို့ BitstakeXBS0.0000001 BitcoinDarkBTCD သို့ PayCoinXPY0.000121 BitcoinDarkBTCD သို့ ProsperCoinPRC30.24 BitcoinDarkBTCD သို့ YbCoinYBC0.0000000002 BitcoinDarkBTCD သို့ DarkKushDANK9303.81 BitcoinDarkBTCD သို့ GiveCoinGIVE62800.75 BitcoinDarkBTCD သို့ KoboCoinKOBO0.00002 BitcoinDarkBTCD သို့ DarkTokenDT0.0000003 BitcoinDarkBTCD သို့ CETUS CoinCETI4186.72
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Thu, 22 Apr 2021 11:50:02 +0000.